Kungani umuzwa wokubanda lapho kuneqhwa uncipha? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuliqiniso ukuthi uma likhithika umuzwa wamakhaza uyehla. Kunokuba kube umuzwa nje, kuyiqiniso langempela, izinga lokushisa liyakhuphuka, yingakho lingabandi kangako, ngoba empeleni alikhulumi. Kungenzeka kanjani uma kuneqhwa ngqo uma kubanda? Ake sibeke umbono omncane ngale ndaba kuqala.
Lapho iqhwa noma iqhwa liyancibilika, ukushisa kudinga ukungezwa ohlelweni. Lokho wukuthi, ukushisa okuhlanganisiwe kubangela ukuthi izinga lokushisa likhuphuke futhi amanzi asuka esiqinile aye esimweni soketshezi. Manje, inqubo ebuyela emuva, leyo yokushintsha amanzi isuke kuketshezi iye esimeni esiqinile, kufanele ikhiphe ukushisa kohlelo. Kudedelwa "ukushisa" kwalawo manzi esimweni samanzi, kusale amanzi esimeni esiqinile. Ngakho-ke, ukushisa okweqile kufanele kukhishwe futhi kuphume ohlelweni, futhi kungaleso sikhathi lapho ukwenza kanjalo kwandisa izinga lokushisa ngenkathi likhithika. Lokhu kubalulekile, kuphela uma inqubo yenzeka, ngoba uma sekukhishwe ukushisa neqhwa limile, amakhaza azonqoba, futhi lapho iqhwa lima lapho amazinga okushisa ehla.
Ukuphikisana okulungile? Ukuyibuka ngokujula okungaphezulu
Lapho imvelo ingaphansi kuka-0ºC, sinomkhawulo lapho amanzi angaqala khona ukuba yiqhwa. Kepha, ukwakha iqhwa, amandla okushisa anikezwe alingana nama-calories angama-80 ngakunye. Njengoba lokho kushisa kungagxilile, kuyaphela nomoya obandayo osele. Uma kwenzeka ngezigidi zamakhekheba eqhwa, kubangela ukwanda kwamazinga okushisa. Ufuna ukwazi?
Uma kubanda impela, kuba nzima ukuthi likhithike uma usukwenzile Ngaphandle kwalokho. Uma kunokwehla okuphawulekayo emazingeni okushisa, kungenzeka ukuthi iqhwa lakheke, elivela kakhulu kumhwamuko wamanzi. Kepha uma selivele likhithikile, umhwamuko wamanzi usuphenduke iqhwa. Ngakho-ke, lapho kubanda kakhulu, umhwamuko wamanzi oqukethwe emkhathini uphansi kakhulu noma awukho nhlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Kungani umuzwa wokubanda lapho kuneqhwa uncipha?